Tilmaamidda Debian Tilmaamaha rakibidda Tillaabo-qaadka ah | Laga soo bilaabo Linux
Waxaan halkaan ku keenay, hage aan sameeyay bilawgii sanadka oo ku saabsan sida Ku rakib tuubista Debian Talaabo talaabo.
Tilmaamuhu sidoo kale qaar ayuu ka kooban yahay Talooyin si loo tixgeliyo markii aan dhammeyno rakibidda, si aan u diyaarinno nidaamkeenna.
Soo Deji Tilmaamaha Rakibaadda Debian
Wadada buuxda ee maqaalka: Laga soo bilaabo Linux » Lagu taliyay » Tilmaamid Debian Tilmaam rakibid Tallaabo-tallaabo ah
Waad ku mahadsantahay wadaagista tusahan, ma lagu buuxin karaa cusbooneysiinta Gnome 3 ee loogu talagalay Isku-xirka Debian? Waa hagaag, waayo-aragnimadayda xilligan ma aha mid aad u fiican.
faahfaahsan ayaa daryeeli kara tan, dhab ahaan… Waxaan u maleynayaa inuu mar horeba hagayay.
Dhanka kale, balooggaagu wuxuu leeyahay waxyaabo aad u xiiso badan (dhammaan dadka reer Cuba waxay xiiseynayaan mawduuca modemyada Linux), waa wax laga xumaado inaadan sii wadin daabacaadda.
Hagaag, ku soo dhawow goobta.
PS: Markaad dhahdo khibradaada waqtigaan (Debian + Gnome3) ma aheyn wax lagu farxo, maxaad dhab ahaan uga jeeddaa?
Mahadsanid! jawaab celinta 🙂 iyo arinta WinModems runtii waa mid xiiso leh. Waan ognahay sababaha loo sii wado daabacaadda 😀 iyo marin u helka 'blogspot' laakiin dib ayaan ugu soo laaban doonaa dhowaan!
Markii aan tixraaco waayo-aragnimadayda Debian + Gnome3, waa inaan ku dhexjiro dhibaatooyinka ku tiirsanaanta caadiga ah, nidaam musuqmaasuq maxaa yeelay si sax ah looma cusbooneysiiyo iyo madax-xanuuno kale 😀
Waa hagaag salaan oo sii wad ...
Uma maleynayo inay suurtagal tahay in Gnome 3 laga helo Debian keydadka. Waxaa laga yaabaa in la soo ururiyo, laakiin ma hubo.
Waqti dheer kahor waxaan doonayay inaan Debian ku tijaabiyo PC-keeda yar ee aan jiifsado, hada tilmaamahan iyo 3-da qoraal In geed uusan naga horjoogsaneyn inaan aragno keynta! Dejinta Debian Waxaan u maleynayaa inay ii fududaan doonto 😀
Waad ku mahadsan tahay hagaha elav
Si fudud mahadsanid Hadafkeygu waa inaan maalin uun ka tago Xubuntu oo aan guursado Debian weligood (in kastoo Xubuntu la socoto muddadan foosha xun ee barashada iyo la-qabsiga, arag waxa igu dhacay welina way diidantahay!
Waxaan idhi, waad mahadsantahay!
Isticmaalka Apt-Pinning on Debian